2012 US Election Content Strategies | Martech Zone
2012 US Election Content Strategies
Ugbu a ọ pụtara na ndị ebumnuche doro anya (nwa m nwoke Libertarian agaghị ekwenye), ọ dị ka ogige abụọ ahụ na-edozi ma usoro ịntanetị amalitela! Ebe nrụọrụ weebụ Whitehouse gbanwere n'onwe ya ka ọ bụrụ otu nnukwu ihu ọdịda maka ijide adreesị ozi-e, chọrọ ka onye ọbịa ahụ pịa ya iji nweta ozi ọ bụla:
Whitehouse na-ahapụ kwa mgbe mgbe ihe omuma ihe omuma nke… na Debgwọ gwọ Mba, peturuolu ahịa, Na ọbụna usuu ndị agha na Iraq. Enwere m obi ụtọ na a nakweere usoro ndị a - mana ọ na-ewute m na ha nwere nkụda mmụọ na nlekọta nke nlekọta ahụ. Ọ ga-amasị m ịhụ ụfọdụ infographics na ihe anaghị aga nke ọma - yana ụfọdụ nkọwa gbasara mbọ ndị ahụ maka nghọta zuru oke.
Ebe nrụọrụ weebụ na-eme mkpọsa na-etinyekwa usoro ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, Ndụ nke Julia bụ ihe ngosi mmekọrịta nke na-ewe onye ọbịa site n'agbata mkpọsa ahụ iji nyere ụmụ nwanyị aka na ndụ ha niile:
Hapụ ozi dị otú ahụ na-abịa na ọnụahịa, n'agbanyeghị, na Ndụ nke Julia mmejuputa akatọla ma nwughachi - nke a bụ Ndụ Julia dị ka ndị Libertarians si kwuo:
Mgbasa ozi Mitt Romney na-ejikọkwa teknụzụ kachasị ọhụrụ, yana infographics nke sitere na Middle Class, Ntorobịa, akwụkwọ ozi nke Hispanic nke na-eweta ọdịdị dị iche na akụ na ụba na mmetụta ya na ngalaba ndị a. Nakwa, ha enyela atụmatụ a nke gọọmentị etiti:
Ndi otu ndi Republicans ka odi nwayo nwayo na nbido ndi mmadu site na ndi mmadu. Ndụ nke Julia nwere ike ịkatọkarị, mana ọ bụkwa ụzọ aghụghọ nke jikọtara ya na onye nhoputa aka nke nwanyị ma bụrụ nkewapụtara nkewa ọ bụla. Ndụ Julia agaghị agbanwe votu nke ndị nkatọ… mana ọ nwere ike ịmegharị ntuli aka nke ndị na-ege ntị ezubere iche nwere ike ịnwe otu nchegbu ndị President Obama na-achọpụta. Nke ahụ abụghị atụmatụ ọjọọ.
Nke ahụ kwuru - echiche m banyere ahịa maka nyochagharị nke Onye isi ala Obama apụtaghị na ọ na-egbu maramara dịka atụmatụ ntuli aka mbụ ya. M tinyere ire na ntì post (nke ahụ na-ewe ọtụtụ ndị iwe), na-ajụ ma ọ bụrụ Obama bụ Vista na-esote dabere na ọrụ dị ịtụnanya ha rụrụ. Anaghị m akatọ President Obama - enwere m obi ụtọ na mkpọsa na mkpali ọ na-agba nke mere ka ndị ntorobịa America na ndị ịtụ vootu na-agagharị.
Ekwenyere m na e nwere ụda olu dị iche na atụmatụ ịzụ ahịa ntuli aka ugbu a. Ọ nwekwaghị otu nchekwube ahụ. Nyere ikpeazụ afọ ole na ole nke a egwu akụ na ụba na oke emefu, ụda bụ a bit ezigbo… na ezi a bit nke atụ ogho na nọmba, ọtụtụ ihe ndị ọzọ accentuation nke positives, na tọn ngọpụ maka ọjọọ. Anaghị m ekwu na ọ bụ mkpọsa ọjọọ - naanị ụda dị iche na nke mbụ. Anyị ga-ahụ ihe ọ na-arụpụta! Na-atụ anya ịzụ ahịa ọdịnaya ndị ọzọ maka ndị otu niile metụtara!
IHE: Ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike ikpuchi na a blog ahia na, n'agbanyeghị mbọ niile, ejiri m n'aka na ndị gị ji obi ha niile na-akwado onye ọ bụla ga-akatọ mkpuchi m ebe a. Anaghị m achọ ịkụda onye ọ bụla ma ọ bụ kwado onye ọ bụla - naanị kwuo maka usoro a na-etinye. Biko chekwaa nsogbu gị maka ndị ga-aga ime na saịtị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ.
Tags: mkpọsantuli akaObamaromney